Inona no atao hoe Kristiana tsara - Fiangonan'Andriamanitra Soisa manerantany
lahatsoratra > toriteny > Inona no kristiana tsara
Efa an-taonany maro aho no tsy te hihinana kisoa. Nividy "saosisy veal" aho tao amin'ny fivarotana lehibe iray. Nisy niteny tamiko hoe: "Misy henan-kisoa amin'ity saosisy veal ity!" Saika tsy nino aho. Amin'ny pirinty kely kosa dia mainty sy fotsy izy io. "Der Kassensturz" (seho fahitalavitra Suisse) dia nanandrana ny saosisy am-paty ary nanoratra hoe: Ny saosisy volo dia malaza be amin'ny barbecue. Saingy tsy ny saosisy rehetra mitovy amin'ny saosisy veal dia iray ihany koa. Matetika izy io dia ahitana henan-kisoa bebe kokoa noho ny veal. Misy ihany koa ny fahasamihafana eo amin'ny tsiro. Nisy mpitsara manam-pahaizana nanandrana ny saosisy veal be mpividy indrindra ho an'ny "Kassensturz". Ny sausage tsara indrindra dia misy 57% fotsiny ary nomena tombony manokana. Androany isika dia mijery akaiky ilay marika "Kristianisma" ary manontany tena hoe: "Ao amin'i Kristy ve no misy an'i Kristy?"
Mahalala olona kristiana tsara ve ianao? Izaho dia tsy mahalala afa-tsy izay azoko lazaina fa kristiana tsara izy. I Jesosy Kristy tenany! Ny hafa dia kristiana dia avelan'i Kristy hiaina ao aminy. Kristiana inona moa ianao? Kristiana 100%? Sa ve ianao dia manana ny ankabeazanao ary ianao irery no mitazona marika izay misy famantarana: "Kristiana aho"! Tena mety ho mpamily ve ianao?
Misy fivoahana amin'n'ity dilema ity! Izaho sy ianao dia lasa kristiana 100% amin'ny alalan'ny fibebahana, fibebahana, amin'ny teny hafa, ny fibebahana amin'i Jesôsy! Izay no tanjontsika.
Amin'ny lafiny voalohany dia mijery ny "fibebahana" isika
Nilaza i Jesosy fa ny lalana marina mankany amin’ny valan’ondriny (ho amin’ny fanjakany) dia amin’ny alalan’ny varavarana. Hoy i Jesosy momba ny tenany: Izaho no ity varavarana ity! Ny sasany maniry ny hianika ny rindrina hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy ho vita izany. Ny lalana mankany amin'ny famonjena nomen'Andriamanitra antsika olombelona dia misy Fibebahana sy finoana dia Jesosy Kristy Tompo. Izay no hany fomba. Andriamanitra dia tsy afaka handray olona izay manandrana hiakatra ao amin'ny fanjakany amin'ny fomba hafa. Jaona Mpanao Batisa dia nitory ireo bus. Izany no fepetra takin'ny Israelita hanaiky an'i Jesosy ho Mpanavotra azy. Mihatra aminao sy izaho anio!
« Ary rehefa voasambotra Jaona, dia tonga tany Galilia Jesosy ka nitory ny filazantsaran’Andriamanitra ka nanao hoe: Efa tonga ny andro, ka efa akaiky ny fanjakan’Andriamanitra. Mibebaha ary minoa ny filazantsara » (Mar 1,14-15)!
Mazava tsara eto ny tenin'Andriamanitra. Mifandray tsara tokoa ny fibebahana sy ny finoana. Raha tsy nanenina aho, dia tsy mijanona ny fototra rehetra.
Fantatsika daholo ny lalàna amin'ny fifamoivoizana an-dalambe. Taona vitsy lasa izay dia nandeha fiara tao Milan aho. Nandeha haingana aho ary namoaka 28 km ora haingana tao an-tanàna. Tsara vintana ihany aho. Tsy nofoanana ny fahazoan-dàlana nitondra ny mpamily. Nomen'ny polisy ahy ilay hetra be sy fampitandremana mpitsara. Ny fanaovana fiara fitateram-bahoaka eny an-dàlana dia midika hoe mandoa vola sy manaraka ny fitsipika.
Hatramin'ny fotoana nidiran'ny ota tamin'izao tontolo izao tamin'ny alalan'i Adama sy i Eva, ny olona dia teo ambanin'ny zon'ny ota. Ny sazin'ny ota dia fahafatesana mandrakizay! Samy mandoa sazy io daholo ny olona amin'ny fiafaran'ny fiainany. Ny "fibebahana" dia midika hoe fanaovana U-fihodinan'ny fiainana. Mibebaha ny fiainany mifandraika amin'ny ego, ka miverena amin'Andriamanitra.
Ny fanaovana bus dia midika hoe: «Fantatro ny fahotako manokana ary miaiky izany aho! «Mpanota aho ary mendrika ny fahafatesana mandrakizay! »Ny fomba fiainako feno fitiavan-tena no mitondra ahy any amin'ny fanjakan'ny fahafatesana.
“Ianareo koa dia efa maty tamin’ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo, izay niainanareo fahiny araka ny fanaon’izao tontolo izao, teo ambanin’ilay Mahery izay manapaka eny amin’ny rivotra, dia ny Fanahy izay miasa ao anatin’ny zanaky ny tsi-fanarahana amin’izao andro izao. Teo amin’ireo isika rehetra fahiny no nitondra ny fiainantsika tamin’ny filan’ny nofontsika sy nanao ny sitrapon’ny nofo sy ny saina, ary efa zanaky ny fahatezerana tahaka ny sasany koa isika (Efesiana). 2,1- iray).
Maty aho noho ny fandikako sy ny fahotako.Tsy afaka ny ho tonga lafatra ara-panahy amin'ny tenako aho. Amin'ny maha-olona maty, tsy manana fiainana ato anatiko aho ary tsy afaka manao na inona na inona ho ahy. Ao amin'ny toeran'ny fahafatesana dia miankina tanteraka amin'ny fanampian'i Jesosy Kristy Mpamonjy ahy. I Jesosy irery ihany no afaka manangana olona maty.
Fantatrao ve ny tantara manaraka? Ren'i Jesosy fa narary Lazarosy, dia niandry roa andro izy vao nifindra nankany Lazarosy any Betania. Inona no nandrasan'i Jesosy? Ny fotoana mandra-pahatongan'i Lazarosy dia tsy afaka nanao na inona na inona intsony. Niandry ny fanamafisana ny fahafatesany izy. Azoko alaina an-tsaina ny zava-bitan'ny fotoana nijoroan'i Jesosy teo am-pasana. Hoy i Jesoa hoe "Esory ny vato!" Marta, anabavin'ny maty, dia namaly hoe: "Hitsimbona izy, efa maty nandritra ny 4 andro"!
Misy zavatra mahasoa ve amin'ny fiainanao izay zavatra tsy tianareo i Jesosy hampahafantatra "ny fanodinana ny vato?" Miverina amin'ny tantara.
Nivaky ny vato izy ary nivavaka i Jesosy ary niantso tamin'ny feo mahery hoe "Lazarosy, mivoaha!" Nivoaka ny maty.
Tanteraka ny fotoana, ny feon'i Jesosy koa dia ao aminao. Manakaiky anao ny Fanjakan'Andriamanitra. Niantsoantso tamin'ny feo mahery i Jesosy hoe: "Mivoaha!" Ny fanontaniana dia hoe, ahoana no hialanao amin'ny fomba fisainanao sy ny fitiavan-tena, ny fitiavan-tena, ny fitiavan-tena sy ny fihetsikao? Inona no ilainao Mila olona ianao hanampy anao hanakodia ny vato. Mila olona ianao hanampy anao hanala ny saron-doha. Mila olona hanampy anao handevina ny fomba fisainana sy ny fihetsika taloha ianao.
Tonga eo amin'ny teboka manaraka izao isika: «Ny antitra»
Ny sakana lehibe indrindra tamin'ny fiainako dia ny toetrako manota. Amin'izany toe-javatra izany, ny Baiboly dia miresaka momba ny "antitra". Izany no toetrako raha tsy Andriamanitra sy tsy misy an'i Kristy. Ny zavatra rehetra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia an'ny toetrako taloha: ny fijangajangana, ny fahalotoako, ny filan'ny fahafaham-baraka, ny faniriana ratsy, ny fitsirirako, ny fanompoan-tsampy, ny hatezerako, ny hatezerako, ny hadisoako, ny fitenenan-dratsy, ny teniko mahamenatra, ny ahy Fatratra sy ny hosoka nataoko. Paul dia mampiseho ny vahaolana amin'ny olako:
«Fantatsika fa ny toetrantsika taloha dia niaraka nohomboana taminy, mba horinganina ny tenan’ny ota, mba tsy hanompoantsika ny ota intsony. Fa izay maty dia afaka amin’ny ota» (Romana 6,6- iray).
Amiko mba miaina miaina akaiky akaiky amin'i Jesosy dia tsy maintsy maty ilay olona antitra. Nitranga izany rehefa natao batisa aho. Jesosy dia tsy nitondra ny fahotako fotsiny rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana izy. Navelany maty teo ambonin'ity hazo fijaliana ity koa ilay "oloko" taloha.
“Sa tsy fantatrareo fa isika rehetra izay natao batisa ho amin’i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin’ny fahafatesany? Koa niara-nalevina taminy tamin’ny batisa ho amin’ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganana an’i Kristy tamin’ny maty tamin’ny voninahitry ny Ray no handehanantsika amin’ny fiainam-baovao koa » (Romana 6,3- iray).
Martin Luther no nantsoin'io rangahy io hoe "Adama". Fantany fa afaka "milomano" ity olona tranainy ity. Omeko hatrany ny "lehilahy antitra" ny fiainana hiaina. Ataoko maloto ny tongotro. Fa Jesosy dia vonona ny hanasa azy ireo matetika! Raha jerena ny hevitr'Andriamanitra dia voasasa tamin'ny ran'i Jesosy aho.
Dinihintsika ny hevitra manaraka "Ny Lalàna"
Nampitahain'i Paoly amin'ny fanambadiana ny fifandraisan'ny lalàna. Nanao fahadisoana aho tamin'ny voalohany nanambady ny lalàna Levita fa tsy tamin'i Jesosy. Niezaka ny hahazo fandresena ho ahy irery aho tamin'ny fitandremana ity lalàna ity. Mpinamana tsara sy tsara fitondran-tena ny lalàna. Izany no nahatonga ahy nampifangaro ny lalàna tamin'i Jesosy. Ny vadiko, ilay lalàna, dia tsy mba nikapoka na nandratra ahy mihitsy. Tsy misy hadisoako velively ao amin'ny fitakiany. Tsara sy tsara ilay lalàna fotsiny! Na izany aza, ny lalàna dia "vady" faran'izay tena mitaky. Manantena ny fahatanterahana avy amiko izy amin'ny faritra rehetra. Nasainy nanadio ny trano aho. Ny boky sy ny akanjo ary ny kiraro dia tsy maintsy ho toerana mety. Ny sakafo dia tsy maintsy omanina ara-potoana sy tonga lafatra. Mandritra izany fotoana izany, ny lalàna tsy manainga rantsantanana manampy ahy amin'ny asako. Tsy manampy ahy any an-dakozia izy na any amin'ny toeran-kafa. Te hamarana io fifandraisana amin'ny lalàna io aho satria tsy fifandraisana fitiavana izany. Tsy mety anefa izany.
«Fa ny vehivavy dia fehezin’ny lalàna, raha mbola velona ny lahy; fa raha maty kosa ralehilahy, dia afaka amin'ny lalàna izay mamatotra azy amin-dralehilahy ravehivavy. Raha manambady olon-kafa izy, raha mbola velona ny lahy, dia atao hoe mpijangajanga izy; fa raha maty kosa ny lahy, dia afaka amin’ny lalàna izy, ka raha manambady olon-kafa izy, dia tsy hijangajanga. Dia toy izany koa ianareo, ry rahalahiko, dia voavono ho an’ny lalàna ny tenan’i Kristy, mba ho an’ny hafa ianareo, dia Ilay natsangana tamin’ny maty, mba hahavokarantsika ho an’Andriamanitra » (Romana . 7,2- iray).
Napetraka tao amin'i "Kristy" fony izy maty teo amin'ny hazo fijaliana, ary niara-maty taminy aho. Noho izany ny lalàna dia manary ny zony ara-dalàna amiko. Jesosy dia nanatanteraka ny lalàna. Efa tao an-tsaiko hatrany am-piandohana Andriamanitra ary nampiray ahy tamin'i Kristy izy mba hahazoany famindram-po amiko. Avelako ny tenako eto hoe: Rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana i Jesosy dia maty niaraka taminy koa ianao? Niara-maty taminy avokoa isika rehetra, saingy tsy izany no niafaran'ny tantara. Ankehitriny dia maniry ny hitoetra ao amintsika tsirairay i Jesosy.
« Fa ny lalàna no nahafatesako ny amin’ny lalàna, mba ho velona ho an’Andriamanitra aho. Voahombo miaraka amin’i Kristy aho. Izaho velona, ​​nefa tsy izaho ankehitriny, fa Kristy no velona ato anatiko. Fa izay ivelomako ankehitriny eo amin’ny nofo dia ivelomako amin’ny finoana ny Zanak’Andriamanitra, Izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy » (Galatiana . 2,19- iray).
Hoy i Jesosy: “Tsy misy manana fitiavana lehibe noho ny mahafoy ny ainy hamonjy ny sakaizany (Jaona 15,13)». Fantatro fa mihatra amin’i Jesoa Kristy ireo teny ireo. Nanao sorona ny ainy ho ahy sy ianao! Rehefa manolotra ny aiko ho an’i Jesosy aho, dia izany no fitiavana lehibe indrindra azoko ambara ho azy. Amin’ny fanolorana ny fiainako ho an’i Jesosy tsy misy fepetra, dia mandray anjara amin’ny soron’i Kristy aho.
« Ary ankehitriny mananatra anareo aho, ry rahalahy malala, noho ny famindram-pon’Andriamanitra, mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, ​​masina, sitrak’Andriamanitra. Aoka izany ho fanompoam-pivavahana araka ny antonony.” (Romana 12,1).
Ny fanaovana bus tena:
Ekeko aloha hoe ny fahafatesan'ny zokiolona.
Hoy aho eny, ny fanafahana ny lalàna amin'ny fahafatesan'i Jesosy.
Ny mino dia midika hoe:
Hoy aho eny amin'ny fiainana vaovao ao amin'i Kristy.
“Koa raha misy olona ao amin’i Kristy, dia olom-baovao izy; efa lasa ny taloha, indro tonga vaovao »(2. Korintiana 5,17).
Ny hevi-dehibe: "Ny fiainana vaovao ao amin'i Jesosy Kristy"
Vakiantsika ao amin'ny Taratasy ho an'ny Galatianina: «Velona aho, nefa tsy izaho ankehitriny, fa Kristy no mitoetra ato amiko». Manao ahoana ny fiainanao vaovao ao amin’i Kristy? Inona no fenitra napetrak’i Jesosy ho anao? Avelany hihazona ny tranonao (fonao) tsy madio sy maloto ianao? Tsia! Nangataka mihoatra noho ny lalàna i Jesosy! Hoy Jesosy:
«Efa renareo fa voalaza hoe:» Aza mijangajanga. "Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe: Na zovy na zovy no mijery vehivavy ka maniry azy dia efa nijangajanga taminy tao am-pony sahady" (Matio. 5,27- iray).
Inona no mahasamihafa an'i Jesosy sy ny lalàna. Ny lalàna dia nitaky be dia be nefa tsy nanampy anao ary tsy tia anao. Ny fangatahan'i Jesosy dia avo lavitra noho ny fangatahan'ny lalàna. Hanampy anao amin'ny baikonao izy. Hoy izy: “Andao isika hanao zavatra rehetra. Manadio ny trano miaraka, mametraka akanjo sy kiraro amin'ny toerana mety ». Tsy velona ho azy irery Jesosy fa mandray anjara amin'ny fiainanao. Midika izany fa tsy tokony ho velona ho an'ny tenanao intsony ianao, fa handray anjara amin'ny fiainany. Mandray anjara amin'ny asan'i Jesosy ianao.
"Ary izany no nahafatesany ho an'ny olona rehetra monina ao, ary izao dia aza miaina ny tenanaofa ho an’izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy» (2. Korintiana 5,15).
Ny hoe maha-Kristiana dia midika hoe miaina amin'ny fifandraisana akaiky amin'i Jesosy. Te handray anjara amin'ny fiainanao rehetra i Jesoa! Ny tena finoana, ny tena fanantenana ary ny fitiavana mihitsy dia miorim-paka ao aminy. I Kristy irery no fototr'izany. Eny, tia anao Jesosy! Manontany anao aho: Iza moa i Jesosy ho anao manokana?
Te hameno ny fonao i Jesôsy ary ho ivon-toerana anao! Afaka manome ny fiainanao tanteraka ho an'i Jesosy ianao ary miaina amin'ny fiankinana aminy. Tsy ho diso fanantenana mandrakizay ianao. Jesosy dia fitiavana. Manome azy ireo ho anao izy ary maniry ny tsara indrindra anananao.
"Fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Jesosy Kristy Tompontsika sy Mpamonjy antsika" (2. Petrus 3,18).
Mitombo fahasoavana sy fahalalana amin'ny alàlan'ny fahalalako aho "Iza moa aho ao amin'i Jesosy Kristy"! Manova ny fitondran-tenako, ny fihetsiko ary izay rehetra ataoko izany. Izay no fahendrena sy fahalalana. FAHALALAZANA NO FAHAGAGANA, fanomezana tsy mendrika! Mikasika ny fitomboan'izany betsaka hatrany amin'ny fahafantarana io "KRISTY ANTSIKA" io. Ny mahadomelina dia ny miaina miaina firindrana tanteraka ao anatin'ity "AN-TRANO KRISTY".
Tonga amin'ny famaranana «Fibebahana mifandray amin'ny finoana»
Vakiantsika «Atao hoe mibebaka ary mino ny filazantsara. Izany no fiandohan'ny fiainam-baovao ao amin'i Kristy sy ao amin'ny Fanjakan'Andriamanitra. Ianao sy izaho dia velona ao amin'i Kristy. Vaovao tsara izany. Io finoana io dia famporisihana sy fanamby. Tena fifaliana izy! Io finoana io dia velona.
Jereo ny fanantenana tsy misy fanantenana eto amin'ity tontolo ity. Fahafatesana, loza ary fahantrana. Mino ny tenin 'Andriamanitra izy ireo: "Andriamanitra mandresy ny ratsy amin' ny tsara".
Miaina ny filàna sy fahasahiranana ataon'ny mpiara-belona aminao ianao, mahatsapa fa tsy manana vahaolana amin'izy ireo ianao. Ny azonao atolotra azy ireo dia ny fiarahany aminy amin'ny fifandraisana akaiky sy akaiky an'i Jesosy. Izy irery no mitondra fahombiazana, fifaliana ary fiadanana. Izy irery no afaka manao ny fahagagana mibebaka!
Napetrany isan'andro eo an-tanan'Andriamanitra. Na inona na inona mitranga, dia azo antoka eo an-tanany ianao. Manana ny toe-javatra rehetra izy ka voafehiny ary manome fahendrena anao handraisana fanapahan-kevitra mety ».
Atao kely sy voampanga ary voampanga tsy misy antony izy ireo. Fa ny finoanao miteny hoe: "Izaho ao amin'i Jesosy Kristy". Hitany izany rehetra ary hainy ny miaina ny fiainako. Matoky azy tanteraka ianao.
Toy izao no nataon'i Paul tao amin'ny toko ny finoana amin'ny teny hebreo:
“Ny finoana dia fahatokiana mafy izay antenaina ary tsy fisalasalana amin’izay tsy hita.” (Hebreo 11,1)!
Izany no tena fanamby amin'ny fiainana andavan'andro miaraka amin'i Jesosy. Nomenao tanteraka ny fahatokisanao azy.
Ity zava-misy manaraka ity dia manisa ahy:
Jesosy Kristy no miaina 100% amiko. Miaro sy mahatanteraka ny fiainako izy io.
Matoky an'i Jesosy tanteraka aho. Manantena anao koa aho!